8 Uru Uru Soy Lecithin Powder nwere uru ya na - Shangke Chemical
8 Uru nwere ike soy Lecithin ntụ ntụ
Ihe a ma ama gbasara soy lecithin agbakwunye agbasawo ụwa niile dịka ọkụ ọgbụgba, ọ bụ ya mere na ahịa ahịa soy lecithin na-aba ụba. Lecithin bụ aha nkịtị na-ekwu maka ogige abụba dị iche iche nke a na-ahụkarị na ahịhịa yana anụ anụ. Na mgbakwunye na imezi nri nri, a na-akpọkwa lecithin maka ike ịbawanye ndụ nchekwa nke ngwaahịa nri dị iche iche dị ka mmanụ esi nri na akwa salad.
Na mbu, a na-enweta lecithin site na egg York, mana ka oge na-aga, achọpụtara ihe ndị ọzọ dị mkpa gụnyere cottonseed, nri mmiri, soybeans, agwa akụrụ, agwa ojii, mmiri ara ehi, sunflower na ọka. N'ime ndị a, soybeans sitere na isi mmalite lecithin bara ụba, nke a na-ewetara anyị soy lecithin.
Gịnị bụ Soy Lecithin?
Soy lecithin bụ ụdị lecithin a na-esite na soybe raw nke na-eji ọgwụ na-egbu mmiri dị ka hexane. Mgbe ahụ, a na-agbanye mmanụ ga - ewepụta lecithin site na mmiri ndị ọzọ na mgbe nke ahụ gasịchara, lecithin ihicha. O so n’ihe ndị riri nri ugbu a n’ahịa.
Soy lecithin ntụ ntụ A na-eji ya eme ihe mgbe ochie yana ụlọ nchekwa nri ahụike dịka ngwa nri nri iji bulie ahụ ike nke ndị ahịa. Ihe mgbakwunye nke soy lecithin ntụ ntụ na-enye ọtụtụ uru ahụike gụnyere mbelata cholesterol. Nke a bụ n'ihi ọdịnaya ha dị elu nke phosphatidylcholine na phosphatidylserine. Ihe ndị a dị n'ụdị phospholipids a na-ejikọ aka na ọgwụgwọ idochi anụ ahụ mmadụ, yana ọrụ ndị ọzọ.
8 Uru Uru Soy Lecithin nwere
Dịka e kwuru na mbụ, socithin soy nwere ọtụtụ uru, ndị bụ isi bụ:
Nnukwu cholesterol dị n’ahụ mmadụ na-adọta ọtụtụ ihe ọghọm ahụike, nke kacha njọ ka ọ bụrụ na ọ na –eme ka ihe ịba mba n’obi belata Ọ dabara nke ọma, ndị nchọpụta na-ekwu maka ihe oriri soyith lecithin achọpụtala na soy lecithin ntụ ntụ ma ọ bụ soy lecithin capsules nwere ike inyere imeju aka imepụta oke ụba nke ịdị elu lipoprotein (HDL), nke a na-akpọkwa "cholesterol" dị mma ".
Mgbe ọkwa nke HDL na-abawanye, ọkwa cholesterol na-adịghị mma (obere lipoprotein dị ala) belata. E nwere ụzọ ndị ọzọ mmadụ nwere ike isi belata ọkwa cholesterol n’ahụ ha, mana ị soụ soy lecithin capsules, mmiri ara ehi socithin ma ọ bụ nri e gosipụtara soy lecithin ntụ ntụ bụ otu n’ime ọgwụgwọ kachasị dị mma maka ọgwụgwọ.
Emere nnyocha iji nyochaa mmetụta soy lecithin na-edozi ahụ n'ahụ ndị mmadụ na-arịa hypercholesterolemia (ọkwa cholesterol dị elu n'ọbara). Ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara na soy lecithin kwa ụbọchị na-eri (ihe dị ka milligrams 17 kwa ụbọchị) kpatara mbelata cholesterol 41 na hypercholesterolemia XNUMX. mgbe otu ọnwa gachara.
N'otu oge, ọkwa LDL cholesterol dara 42% na pasent 56 mgbe ọnwa abụọ gachara. Nke a na-egosi na soyithin soyith leire ọzọ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ dị mma maka hypercholesterolemia.
2. Soy lecithin na mgbochi ure ara
Dika ihe omumu ihe omumu nke 2011 Epidemiology Journal lekwasara anya na soy lecithin na mgbochi igbochi ure ara, ihe mgbakwunye lecithin nwere ike ime ka ọghara inweta nsogbu kansa. Ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara mbelata ọrịa kansa ndị nwanyị n'etiti ụmụ nwanyị postmenopausal riri ndị riri soy lecithin mmeju n'ime oge ikpe.
A na-enyo enyo na mbelata ọrịa cancer a nwere ike ịbụ n'ihi soy lecithin nwere phosphatidylcholine. N'elu nri, phosphatidylcholine gbanwere choline nke na-arụ ọrụ dị mkpa na mbenweta ọrịa kansa.
Agbanyeghị, nchọpụta mkpụrụ ndụ soyithin soyithin na ọrịa ara ure dị mkpa iji chọpụta ma ọ bụrụ n'eziokwu, soy lecithin nwere ike bụrụ ọgwụgwọ dị mma maka ọrịa ara ure.
3.Mdabere nnwere onwe colitis
Ulcerative colitis, ọrịa nke afọ ọsịsọ nke ọrịa digestive na-egbu egbu na-emetụta ọnya, na-ewetara ndị ọ na-ewute ihe mgbu ọtụtụ. Ọ dabara nke ọma, ndị jirila ụdị nri mkpụrụ osisi socithin na-enweta ahụ efe dị ukwuu nke mgbaàmà nke ọrịa ahụ.
Mgbe soy lecithin soy na-agbakwunye eriri afọ, ọ na - emegharị ahụ, na - emepụta ihe mgbochi na njikọ nke eriri afọ ma na - eme ka mucous dịkwuo mma. Ihe mgbochi ahụ na-echebe ọnya ahụ pụọ na ọrịa nje ma na-enye aka na mgbaze ka mma.
Nke ka nma, nyocha na-egosi na ọdịnaya phosphatidylcholine dị na soy lecithin ntụ ntụ nwere ike belata mbufụt metụtara ọnya afọ. Nke a bụ na mgbakwunye na iweghachi ihe mgbochi ọnya ahụ ọrịa mebiri.
4.Better njikwa nrụgide anụ ahụ na nke uche
Soy lecithin nwere phosphatidylserine, phospholipid dị mkpa nke a ma ama na-emetụta homonụ na-akpata nchekasị. Karịsịa, ndị na-eme nchọpụta na-ekwu na ihe mgbagwoju phosphatidylserine na-arụ ọrụ na phosphatidic acid (nke dị na soy lecithin) na-enye nhụsianya na-ebelata mmetụta ahụ mmadụ. N'ihi ya, otu nnyocha na-atụ aro na soy lecithin nwere ike ịbụ ọgwụgwọ nkịtị maka ọnọdụ ahụike metụtara nrụgide.
Na mgbakwunye, nchoputa nke ihe omumu emere na 2011 ma gosiputara na American Journal of Clinical Nutrition na-egosi na ndi mmadu nwere oke choline oriri (gụnyere ndị na-eri soy lecithin mgbe niile) nwere ahụ erughị ala anụ ahụ na nke uche echiche. N'ihi ya, ha nwere arụmọrụ ọrụ nchekwa dị mma karịa ka ha na mmebi dementia.
5.Skin mgbochi mmiri
Mgbe ejiri ya dịka a tụrụ aro ya, agịga soyith nke leyithin nwere ike melite mkpụkpọ gị. Ọ bụ usoro ọgwụgwọ dị mma maka eczema na ihe otutu, n'ihi akụrụngwa ya. Ka a sịkwa ihe mere socithin soyithin ji bụrụ ihe dị mkpa na ngwaahịa akpụkpọ anụ.
Ọmụmụ ihe emere na ụmụ anụmanụ iji chọpụta mmetụta soy lecithin egosila na ọ nwere ike ịkwalite ọrụ ọgụ. Ybọchị soy lecithin Mmeju nyere mkpụrụ ndụ ọbara ọcha aka n'ọgụ ha na-alụ ọgụ na mgbawa n'ọbara.
7.Dementia mgbaaka mgbapụta
N'ihi ọdịnaya choline dị elu, soy lecithin na-enye aka na nkwukọrịta ka mma n'etiti ụbụrụ mmadụ na akụkụ ahụ ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi choline bụ onye isi na nkwukọrịta. N’ihi nke a, ndị mmadụ na-arịa ọrịa dementia nwere ike irite nnukwu uru site na soy leinithin ma ọ bụrụ na ha etinye ya n’atụmatụ nri ụbọchị ha.
8.Menopause mgbaaka mgbapụta
Ọtụtụ nnyocha na-egosi na soy lecithin mgbakwunye oriri nwere ike inye nnwere onwe mgbapụta menopause. Nke kachasị, achọpụtara ya iji bulie ike, mezie isi ike akwara ma mee ka ọkwa ọbara dị ka ọnọdụ dị n'etiti ụmụ nwanyị na - eme ọfụma.
N'ime ọmụmụ emere na 2018, ejiri ụmụ nwanyị iri iteghete dị n’agbata afọ 96 ruo 40 dịka nyocha iji gosipụta ma mkpụrụ soy lecithin nwere ike imezi mgbaàmà ike ọgwụgwụ n’etiti ụmụ nwanyị. E tinyere ụfọdụ n’ime soyithin soyithin supplementation na ndị ọzọ na placebo.
Mgbe oge ikpe ahụ gasịrị, ndị ọrụ nyocha chọpụtara na ụmụ nwanyị ndị ahụ nọ na soyith lecithin supplement supplement nwere ezigbo akwara ike na ọbara mgbali dị iche iche karịa ndị otu placebo. Ọzọkwa, mgbaàmà ike ọgwụgwụ nke mbụ ahụ nwere enyemaka enyemaka, mana ọ bụghị otú ahụ ka ndị otu ahụ nọ.
Kedu ka lecithin si arụ ọrụ?
Dị ka phospholipids ndị ọzọ, Mkpụrụ lecithin na-agbari na mmiri mana mmanụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agwakọta mmiri na mmanụ, moleklọ ga-agbari na ngwakọta. N’ezie, a na-ahụkarị ha na ngwakọta nwere mmiri na mmanụ, ọkachasị ebe ụmụ irighiri mmiri dị na njikọta mmanụ. N'ebe ndị dị otú ahụ, mmanụ ọdụdụ ha na-abanye na mmanụ na phosphate dị iche iche n'ime mmiri.
N'ihi nke a, lecithin emulsify nwere ike ịmepụta obere ihe nchebe n'akụkụ ụmụ irighiri mmanụ, si otú a na-eme ka mmanụ dị n'ime mmiri. Otu fosphate ndị a dọtara na mmiri na-eme ka ụmụ irighiri mmanụ nke ga-adị, ka ihe dịrị, ka ọghara ịnọ na mmiri, ịnọ na mmiri ruo ogologo oge. Nke a na - akọwa ihe kpatara akwa Mayonezi na salad anaghị ekewapụ iche na akụkụ mmanụ na mmiri.
Soy lecithin soy na-ebute ma ọghọm ya
Iri nri soy lecithin nwere ike bute nsonaazụ soy lecithin. Ihe ndị soy lecithin soy na-eso gụnyere:
Ọ na-akpata ọrịa soy?
Ọ bụrụ na ahụ gị na - eme soybeans anụ ahụ nke ukwuu, ị nwere ike ịmalite ibụ soyithin soyith nke soy. Yabụ, ọ ga-adị mma ma ị gakwuru onye na-ahụ maka ọrụ ahụike gị ma ọ bụrụ na ị nweta soybean allergy tupu ịmalite ị soụ mmiri ara soyith leyithin, soy lecithin nke nri nri ndị ọzọ nwere soy lecithin.
Yabụ, soy allergy sokwa na nsonaazụ soy lecithin nwere mmetụta. Kaosiladị, ọ na - aputa ihe naanị oge.
Enwere njikọ ọ bụla n'etiti soy lecithin na ọkwa estrogen na ahụ gị?
Enweela nchegbu banyere mmekọrịta dị n'etiti soy lecithin na ọkwa estrogen na ahụ mmadụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-azọrọ na oriri nke soy lecithin nwere ike igbochi mmepụta nke thyroid na homonụ endocrine. N'agha, ọgba aghara ahụ nwere ike ibute nsogbu ahụike dị iche iche gụnyere okwu metụtara nsọ nsọ.
Agbanyeghị, ọnọdụ n'ezie bụ na onweghị ihe sayensị gosipụtara na ahụ mmadụ nwere ike iji “estrogen plant” dịka nke ya. Ihe estrogen Lecithin nwere ike imetuta estrogenic nke mmadu ma oburu na o sitere n’ite anumanu. Nnyocha nke Thorne Research duziri na-akwado ọkwá a. Nchoputa nke nyocha a gosiputara na soy na ngwa agha sitere na soy adighi eme ka nsogbu ndi mmadu ghara idi gharazie.
Ya mere, enweghị mmekọrịta dị n'etiti soy lecithin na ọkwa estrogen na ahụ mmadụ.
Etu esi ewere Soy Lecithin Soy?
A na-enweta soy lecithin supi leyithin n'ụdị dị iche iche gụnyere soy lecithin capsules, soy lecithin kani, soy lecithin paste, soy lecithin fluid na soy lecithin granules.
Ziri ezi soy lecithin onunu ogwu bụ onye dị adị site n’otu onye gaa na onye ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ọ dabere na ihe dị iche iche dịka ọnọdụ ahụike niile yana afọ nke onye ahịa ya.
Ọ dị mma ịmara na enweghi ezigbo aka sayensị na-egosi oke ịgwọ lecithin nke ahụ dị mma maka otu ọnọdụ. Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, usoro ọgwụgwọ ahụ sitere na 500mg ruo 2,000mg, mana ọ dị mkpa ka ị kpọtụrụ onye nlekọta ahụike gị iji gosipụta usoro kachasị mma maka gị.
Ọ bụ ezie na nke a abụghị iwu, ọ ga-adị mma ka ị were nri soy lecithin.
Soy lecithin ntụ ntụ na-eji
A na-eji soy lecithin ntụ ntụ mee ihe maka ebumnuche dịgasị iche iche gụnyere:
Emulsification: Ihe oriri na ndị na-emepụta ihe ịchọ mma na-eme ka soy lecithin zụta iji soy lecithin ntụ ntụ dị ka emulsifier ma ọ bụ onye na-eme ka ọnụnọ na-arụ ọrụ na usoro ha.
Schọ mma na ichekwa nri: mgbe etinyere n’ime nri nri dika choko, ihe ndi ozo, mmanu ahihia, ihe eji esi nri, nke eji akwa nri ma obu ihe ịchọ mma (ihe eji eme nri, shampoos, ndi ahu ndi n’azu aru, ma aru ma obu egbugbere onu) soy lecithin ntụ ntụ na - eje ozi dika ihe eji edozi ya, na-agbatị ndu ha. .
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eme soyith leyithin zụrụ iji lecithin dịka ihe eji echekwa ihe ịchọ mma na ngwa nri ụlọ ha mere.
Choline supplementation: Ọtụtụ mmadụ na-eme soy lecithin zụọ n'ihi na ha maara na soy lecithin ntụ ntụ bụ isi iyi choline bara ụba. Can nwere ike fesaa otu ma ọ bụ abụọ nke ntụ ntụ na smoothie gị, ihe ọ juiceụ ,ụ, bred, ọka, oatmeal ma ọ bụ ihe ọ otherụ otherụ ọ bụla ọzọ na-amasị gị kwa ụbọchị.
Mgbakwunye a na-enye gị ọtụtụ uru ahụike. Uru ya gụnyere obere ọrịa cancer ara, nsogbu mgbaze, ara na enweghị nsogbu, ahụike uche ka mma, mgbapụta mgbapụta na usoro mgbochi ọfụma, n'etiti ndị ọzọ.
Lecithin na Ibu Ibu
Lecithin na - eme dị ka onye na - ere anụ ahụ na emulsifier n'ime ahụ mmadụ. Ọdịnaya choline dị na lecithin na-agbaze abụba a na-achịkọta n'ime ahụ, na-eme ka imeju metabolism abụba na-arụ ọrụ nke ọma. N'ihi ya, ahụ nwere ike gbaa abụba na calorie dị elu, yabụ na ị nwere oke ibu.
Ọzọkwa, nyocha na-atụ aro na ndị na-a leụ lecithin na-ahụkarị arụmọrụ na ntachi obi ka mma karịa nke a Yabụ na site na inyeju lecithin, mmadụ nwere ike rụọ ọrụ ike na oge ọ ga na -eme, belata ibu karịa.
Ebee ka Zụta Soy Lecithin
Na-eche banyere soy lecithin soyithin ebe ị ga-azụ? Ọ bụrụ n’inyocha intanet, ị ga-achọpụta na enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike isi zụta soy lecithin bulk ma ọ bụrụ na ịchọrọ ire soy lecithin. Agbanyeghị, ị ga-emerịrị mgbali ike iji gosipụta iguzosi ike n'ezi ihe nke onye na-ere ahịa iji hụ na soy lecithin bulki ị zụrụ bụ ezigbo. Atụkwasịla onye ọ bụla na-ekwu na nwere soy lecithin maka ọrịre ma ọ bụrụ na ịchọghị ịdaba n'aka ndị scammers ma ọ bụ ndị na-ere ahịa adịgboroja. Gaa maka onye zụrụ azụ enyere ikike.
Ojiji nke lecithin soy dị ọtụtụ ma uru ya karịrị ihe ọghọm na ọghọm ya na ojiji soy lecithin. Agbanyeghị, ndị ọrụ socithin soyithin kwesịrị iso ihe ndị a tụrụ aro ka ha mee iji mee ihe kachasị mma na ya. E wezuga ya, oge obula ha choro ime ka soya lecithin zuta nke onwe ha ma obu ahia ha, onye kwesiri ijide n'aka na ha nwetara ya site na isi okwu kwesiri ntukwasi obi.
Chung, C., Sher, A., Rousset, P., Decker, EA, & McClements, DJ (2017). Oftọ emulsions nri site na iji emulsifiers eke: Itinye n'ọrụ nke quillaja saponin na soyith lecithin iji mepụta kọfị kọfị. Journal of Engineering nri, 209, 1-11.
Hirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Mmetụta nke soy lecithin na ike ọgwụgwụ na ọrịa menopausal na ụmụ nwanyị nọ n’agbata afọ: ọmụmụ na-enweghị ntụpọ, nke nwere nku abụọ, na-achịkwa placebo. Akwukwo nri nri, 17(1), 4.
Oke, M., Jacob, JK, & Paliyath, G. (2010). Mmetụta socithin soy na-eme ka mkpụrụ osisi / ihe ọ sauceụ fruitụ na-abawanye uru. Nyocha nyocha nri, 43(1), 232-240.
Yokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Nkọwapụta nke liposomes nke lyophilized mepụtara socithin na-enweghị ọcha: ọmụmụ banyere casein hydrolyzate microencapsulation. Akwụkwọ akụkọ Brazil nke Chemical Engineering, 29(2), 325-335.
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013). Akpata oke ọdachi na omume rheology na soy lecithin na Tween 80 based emulsions. Journal nke injin nri, 116(1), 72-77.